Ogaden News Agency (ONA) – Nabada ka jirta Ogadenya waa mid aan la doonaynin in la arko
Nabada ka jirta Ogadenya waa mid aan la doonaynin in la arko
Dawladaha Kali-Taliska ah waxay caan ku yihiin beenta iyo qarinta wadciga dhabta ah ee ka jira dalalkooda. Waxayna ku shaqeeyaan halku-dhiga caalamka u yaqaano- Goebbelsian Propaganda- ama brobagaandada Goebbel oo ah – Ku soo celceli been 1000 jeer run ayay isu badaliye (repeats a lie thousand times it will become a truth). Dacaayadda Itobiya nidaamkaa ayuu ku shaqeeyaa. Waxayna u adeegsadeen 10naan ka mid ah Tv-yada ka baxa dalkeeda iyo kuwa lacag doonka ah ee tujaarta Somaliyeed ay furteen. Waxaa intaa dheer TV-gii Somali leedahay ee wax ka duwan wararkaa sheega in loo hanjabo ama laga xidho hawada sidii ku dhacday SCH.
Waxay 1000 jeer iyo ka badanba ku soo celceliyaan Itobiya iyo kooxaha u kiraysan nabad ayaa ka jirta Ogadenya oo wax dagaal ah kama socdo hadda. Sidoo kale, Jabhadda ONLF waa la tirtiray oo hadda dibadaha umbay ka qayliyaane gudaha waxba kagama hadhin.
Marka la rabo in dadka la tuso runnimada beentaana waxaa la’is raaciyaa Cabdi iley oo madaxa ku duubtay macawistii Wayaanaha iyo kooxd sawir-qaadayaal ah oo rati u raranyahay ama reero dhex taagan.
Beenta kale ee kharashka xoogan uu ku bixiyo gumaysiga ee la soo celceliyana waa wadanka Ogadenya horumar ayaa ka socda. Ka dibna mashaariic laga fuliyay Jigjiga iyo beeraha Godey ayaa ku xiga ama ceelal rig ah oo la qodayo ama wadada qabyadaha ee caanka noqotay. Waxaanan ogsoonahay inay Jigjiga waligeedba ay Itobiya ula dhaqmi jirtay inay ka mid tahay xadka Itobiya oo mashaariicda sida korontada ama teleefanka ama wadooyinka uu halkaa un ku ekaa. Nidaamkii noocaa ahaa waxba iskama badalin, waxaa lagu kordhiyay un shacabkii lahaa oo loo ogolaaday inay dagaan oo wax ka dhistaan, midaasoo xukuumadihii ka horeeyay Wayaanaha aanay u ogolaan jirin. Dalka intiisa kale maxaa ka socda oon ahayn cuna-qabatayn iyo looma gudbi karo dhankaa. Wariyhii tagay Dhagaxbuur ee ka socday NYT waa iyadii la qabtay ee sida xun loogu bahdalay si aanu dib dambe ugu soo noqonin Ogadenya wariye Mareykan ah.
Waxaa ku xigay Wariyayaashii Sweden oo iyagana uu caalamka arkay siyaabihii foosha xumayd ee loola dhaqmay iyo beentii lagu xukumay ay iska kaashadeen Meles Zinawi iyo Cabdi iley.
Hadaba Brobagaandada Goebbel een koobka shaaha ah la qiimiga ahayn, saxafiyiinta Somaliyeed hadday ixtiraamayaan naftooda waxaa haboon in aanay ku soo celcelinin. Waddanka Ogadenya inuu halgan hubaysan ka socdo caalamka waa laga ogsoon yahay, Itobiyana beentaa waxay u dhiibtay un qaar Somali ah oon aduun iyo aakhiro midna u aabayeelin oo jeebka wixii loogu shubo un ku shaqeeya.